Company Profile - Shanghai Taole Machinery Co., Ltd
Shanghai TAOLE ígwè CO., LTD bụ a Leading ọkachamara Manufacturer, Supplier na ekspootu nke a dịgasị iche iche nke Weld nkwadebe igwe ka efere Bevelling Machine, Pipe Bevelling Machine, Pipe Cutting na Bevelling Machine etc , na-ọtụtụ-eji Steel Construction, shipbuilding, aerospace, Pressure arịa, Petrochemical, Oil & Gas na niile ịgbado ọkụ ulo oru n'ichepụta. Inwe "GIRET" na "TAOLE" abụọ ụdị maka mba ahịa na ọkọlọtọ na ahaziri igwe ka kwa chọrọ .. Anyị mbupụ anyị na ngwaahịa na ihe karịrị 50 ahịa gụnyere Australia, Russia, Asia, New Zealand, Europe ahịa, wdg Nakwa mwube elekọta mmadụ na wholesalers na n'ụwa nile, Anyị na-eme nnukwu onyinye iji melite arụmọrụ on beveling na-egwe ọka maka Weld nkwadebe.
Dị ka a ọkachamara rụpụta na China, Anyị na-eche mpako ka credentialed na ISO 9001: 2008, OA Certificate na SIRA Asambodo, nke bụ ihe àmà nke otú ọma anyị na-emepụta anyị machines.With mmepụta otu, mmepe otu, mbupu otu, ahịa na aftersales ọrụ otu maka ahịa enyemaka.
Anyị ígwè ọrụ na-ọma-anabata na elu aha na ma anụ ụlọ na esenidụt ahịa ebe anyị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ a si 2009. Na ihe karịrị afọ 10 'experiance, anyị engineer otu na-emepe emepe na-emelite igwe dabeere na ike ịzọpụta, elu arụmọrụ, safty nzube si mbụ ọgbọ ruo ugbu a pụta emana. Dị iche iche igwe nlereanya ka ndị ahịa 'nhọrọ nwere ike fọrọ nke nta izute niile beveling arịrịọ maka ịgbado ọkụ ụlọ ọrụ na elu arụmọrụ.
Anyị ozi bụ "àgwà, ọrụ na nkwa" . Inye ndị kasị mma ngwọta maka ahịa na elu àgwà na oké ọrụ.
Ekwentị: +86 21 64140658
Faksị: +86 21 64140657
Iron igwe beveling igwe maka agha ...
Iron steel beveling igwe nke ndi agha nke China China na emeputa ngwa agha nke ndi agha. Rịọ ka igwe igwe kọpị igwe ọ bụla na nke igwe anaghị agba nchara. Ha nwere ọkpụrụkpụ efere ...
Nnukwu mgbidi gbara agba oyi na-egbu beveling m ...
Ngwongwo igwe kachasị mma nke ọkpọkọ mgbochi beveling igwe ASME B16 25 sitere na SHANGHAI TAOLE MACHINE CO., LTD chọrọ ndị ahịa: dayameta 762mm 30 inch, ọkpụrụkpụ 60mm. Arịrịọ ime ọkpọkọ ọkpọkọ ...